မန်းလေးနဲ့ ရန်ကုန် တွေ့ကြပြီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မန်းလေးနဲ့ ရန်ကုန် တွေ့ကြပြီ
မန်းလေးနဲ့ ရန်ကုန် တွေ့ကြပြီ
Posted by manawphyulay on Jul 3, 2011 in Creative Writing, My Dear Diary | 50 comments
လေးပေါက် ရန်ကုန်ရောက်နေတယ်လို့ နေပြည်တော်က ပြန်ပြန်လာချင်း လေးဖက်က ပြောလို့ ၃ ရက်နေ့ကို တွေ့ကြမလားဆိုပြီး ဒီနေ့မနက် ၁၀ နာရီ မြေနီကုန်း စီးတီမတ်အောက်က ကော်ဖီဆိုင်ကို ချိန်းလိုက်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ နောက်ကျနေမှာစိုးလို့ ကားကို နှစ်ဆင့်စီးပြီး စီးတီးမတ်အောက်ကို ၀င်လာတော့ ထိုင်နေတဲ့သူတွေထဲက လေးဖက်ကို လိုက်ရှာတာ မတွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်။ နောက်မှ လေးဖက်က ကင်မရာကြီးကိုင်ပြီး ရောက်လာတယ်။ နေမကောင်းနေတာ မနည်းထလာရတယ်လို့ ပြောပြီး လေးဖက်ဝယ်ကျွေးတဲ့ မုန့်နဲ့ ကော်ဖီကို ၀ါးတီးဆွဲရတာပေါ့။ ခဏနေတော့ လေးဖက်က နေဦး ကိုပေါက်ကို ဖုန်းဆက်လိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီး ခဏထွက်သွားတယ်။
တော်ကြာနေတော့ ပြန်လာတယ်။ မြေနီကုန်းရောက်နေပြီပြောတယ်ဟ။ မုန့်စားရင်းစောင့်နေလိုက်တာ ၁၀ နာရီခွဲခါနီးတော့ လေးပေါက်တစ်ယောက်ရောက်ချလာပါတော့တယ်။ မြေနီကုန်း ဂမုန်းပွင့်ဝင်နေလို့တဲ့ မဟေသီတော့ မပါဘူးတဲ့။ ဒါနဲ့ လေးပေါက်အတွက် မုန့်နဲ့ကော်ဖီ ဒကာကတော့ လေးဖက်ပေါ့။ မနောက သွားဝယ်ပေးတဲ့ ဒကာပေါ့ ဟိဟိ။ ဒါနဲ့ ထိုင်ပြီး စကားတွေပြောနေလိုက်တာ ၁၂ နာရီထိုးတော့မှ စီးတီးမတ်အပေါ်ခဏတက်မယ်ဆိုပြီး တက်လိုက်တယ်။ နောက်စာအုပ်တန်းလျှောက်နဲ့ပေါ့။ လေးပေါက်က သွားစရာရှိတယ် လမ်းခွဲကြမယ် မနက်ဖြန်ဆို ပြန်တော့မယ်တဲ့။ ဒါနဲ့ သုံးယောက်သား စကားတွေကောင်းနေပြီး ပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ လေးပေါက်ကတော့ ပြောသွားတယ်။ ရေးစရာ စာမူတွေ ရသွားပြီတဲ့ တစ်ပုံကြီး ရေးတော့မယ်ပုံပဲနော်…… ထပ်မံလည်း တွေ့ဆုံချင်ပါသေးတယ်။ လေးပေါက်က ထပ်တွေ့ဖို့ နည်းလေးလည်းပြောသွားသေးတယ်….. လေးဖက်ကြီး နေမကောင်းပဲ လာခဲ့လို့ အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
ဟယ် .. တကယ်ကြီးတွေ့လာတာလား … အိမ်မက် မဟုတ်ဘူးလား
အိမ်မက်မမက်ပါ။ လက်တွေ့ တွေ့ပါသည်…..
ဂေဇက် အဖွဲ့သားတွေအားလုံးတွေ့ဆုံနိုင်ကြရင်ကောင်းမယ်နော်…အားလုံးစုပေါင်းပြီး လူမူရေးလုပ်ငန်းလေးတွေ အတူတကွလုပ်နိုင်ကြရင်သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့တွေးမိပါတယ်၊ကျွန်တော်က ဩဂုတ်လလောက်မှာ မြန်မာပြည်ပြန်လာဖို့ရှိပါတယ်။တွေ့ဆုံနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ ပျော်စရာပဲပေါ့…
မနက်ကတော့ လေးဖက်နဲ့ ပြောဖြစ်ကြပါတယ်။ ခုလည်း ဖိုရမ်တွေမှာ လူငယ်လူကြီးတွေ တွေ့ဆုံပွဲလုပ်နေကြပြီး ပရဟိတတွေလုပ်နေကြတာ အတော်ကို အားရဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေလည်း ပြောဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ၀မ်းသာမိပါတယ်။
လေးပေါက်က ထပ်တွေ့ဖို့ နည်းလေးလည်းပြောသွားသေးတယ်…..
အဲဒီ နည်းလေးက ဘာလဲ ဟင်…..
ဟီး ပြောပြဖူး သတ်ချင်သတ်လိုက်… မနက်က ပြောတဲ့ထဲမှာ ရွှေမင်းသားအကြောင်းလည်းပါတယ်။
ဟ … သတင်းက မြန်လှချည်လားဟ ပြန်လာပြီး ကောင်းကောင်းနေမကောင်းလို့ အိပ်ပျော်သွားပြီး
အခုဘဲ GZ ဖွင့်လိုက်တော့ … သတင်းက တက်နေပြီ ….။
ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ … မောင်ရယ် ( မနောရယ် )
မြန်ရမှာပေါ့… နို့မို့ဆို လေးဖက်ကြီး ဦးသွားမှာပေါ့ သတင်းထူးကိုနော်……. နေကောင်းသွားပြီလား…. ကျန်းမာရေးလည်းဂရုစိုက်ပါဦး လေးဖက်ရာ။ ဂေဇက်မှာ ရန်ဖြစ်ဖော်မရှိမှာစိုးလို့…
ဟေ- ဘယ်တုန်းကလဲ။ ဘယ်နေရာမှာလဲ။ဘယ်သူတွေ တွေ့ကြတာလဲ။ ဘယ်နှစ်ယောက်လဲ။ ဘာတွေ ပြောကြသေးလဲ။ ( သတင်းသမား လေသံဖြင့်)
အဲတော့် ပျော်စရာကြီး အနော်တို့ လည်း တွေ့ချင်လိုက်တာ…..
ကင်မရာ ကိုင်ပြီး လာ တာ ဆိုတော့ အားလုံးကို ဓါတ်ပုံ မှတ်တမ်း ရိုက်ယူသွားတယ် မလား..
အဲဒီမှာ စ တာပဲ..
လေးပေါက် ဆိုတာ.. စီအိုင်ဒီ က ရာထူးကြီး တစ်ဦးပါ။
ရွှေမင်းသားတောင် သူ့ကော်ဖီနဲ့သူ သွားတာဆို……. မနော က ယူမသွားဘူးလား.. တော်တော် သတ္တိ ကောင်းတာပဲ…….:P
မနောတဲ့နော် တစ်ကောင်ထဲ ဒါပေမဲ့ ခြသေ့င်္
လေးပေါက်က မင်းသားဖြစ်နေပါရော့လား တုံ
ရွှေမင်းသားက ရန်ကုန်ရောက်တော့ မျက်လုံးလေး ကလယ်ကလယ် နဲ့ ဟိုငေးဒီငေး ရင်း သူများတွေ ကော်ဖီမှာတာ တွေ့လို့ လိုက်မှာ လိုက်တာပါ။
မှာပြီးမှ ကော်ဖီက ခါးလွန်းလို့ မသောက်နိုင်ဘူးလေ…
ဒီလိုမှန်းသိရင် စီအိုင်အေကိုသတင်းပေးပြီး မြေနီကုန်းစီးတီးမတ် ကော်ဖီဆိုင်ကို ဒုံးပျံနဲ့လှမ်းပစ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ ကျနော်တခုကြားတာ ဦးဖက်တီးက အဲဒီကော်ဖီဆိုင်မှာ ရှယ်ယာဝင်ထားတယ်တဲ့။ သူကျွေးရင် အားမနာနဲ့ စိတ်ရှိလက်ရှိသာ အားပေးလိုက်ကြ။
အော ခလေးမ မနောမနော … မသိရှာဘူးကိုး … လေးပေါက်ကြီးနောက်ကျနေတာ ဂမုံးပွင့်ဝင်လို့ မဟုတ်ဘူး သိလား … ။ အဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့ကို ကြိုချိန်းထားတာ … etone၊ ဆူး ၊ မဝေ ၊ နွယ်ပင် ၊အာဂ ၊ သူရသ၀ါ၊ eros ၊ အာဖျံကွီး ၊ ချာတူးလန် နဲ့ AKKO တို့ကို မြေနီကုန်းစီးတီးမတ်ရှေ့မှာ ချိန်းပြီး …. လူစုံတော့ အနောက်ဘက်လမ်းက မြစံပယ်မှာ မုန့် အ၀ကျွေးတာလေ … ။ စကားကောင်းနေတာနဲ့ မနောနဲ့ ချိန်းထားတာ နည်းနည်းနောက်ကျသွားတာ ထင်တယ်…. ။ လေးဖက်တို့ မနောတို့နဲ့ တွေ့ပြီးတော့လည်း … ပြန်လာထိုင်သေးတယ် … ဒို့ အဖွဲ့ တွေ …. မြစံပယ်က ထွက်တော့ … သုံးနာရီထိုးဖို့ ဆယ်မိနစ်တိတိပဲ
ဒီတစ်ခါ အီးတုံးတော်သွားပြီ … အရင်တစ်ခါအိမ်မက်တုန်းက မဝေကို ထည့်မမက်တာကို သတိပေးလိုက်တာ အခု သတိတရနဲ့ ထည့်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါပဲ …
နောက်တာပါ မဝေရယ်… ထင်ယောင်ထင်မှားလေး စလိုက်တာ … မဝေတောင် နှစ်ကိုယ်ခွဲပြီ ဘုရားသွားဖူးတယ်လေ အဟဲ …
အဆိုပါနေ့တွင် eros လုံးဝ(လုံးဝ) မလာပါ။ ဘ၀အတွက် အရေးကြီးသော သူနှင့်ကိစ္စရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဒေါ်etone ရေ၊ ငါမပါပဲ ငါ့ နာမည် မထည့်ပါနဲ့ဟာ။ င့ါမှာ အခု ငါ့ချစ်သူအထင်မှားပြီး ငါ့ကို ပြဿနာရှာနေတယ်ဟ။ ငါ ကွိုင်အကြီးကြီးတက်နေတယ်။
လာတုန်းကတော့ ခပ်တည်တည်နဲ့.. အခုတော့ဘာ ကွိုင် ကြီးလဲ.. လိမ်တယ်ဆိုတာ သိရင် ပို အပြစ်ကြီးမယ်နော်။
eros သည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စများကြောင့် မန်းလေးဂေဇတ်တွင် လုံးဝရေးတော့မည် မဟုတ်ပါ။ လုံးဝပတ်သတ်တော့မည် မဟုတ်ပါ။
မပတ်သတ်ဘူး ဆိုတဲ့ အကြောင်း မပတ်သတ်တော့ဘူးလို့ ထပ်ခါ ထပ်ခါ လာ ပြောသွားတယ်။
နင့်ချစ်သူကလည်း ဒီလောက်တောင် တိုတတ်နေလျှင် တခါတည်း စေ့စပ်ချင်စေ့စပ်ထား ၊ လက်ထပ်ချင်လက်ထပ်ထားပါလား … ။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ စကြနောက်ကြတာတောင် တိုနေတာ ရှေ့လျှောက်နင်တော့ ဗျာများဦးမယ် … ။ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် မျှမျှတတ နားလည်မှူရှိမှသာ ဘ၀ခရီးရှည်ကြီးကို လျှော့လိုက်တင်းလိုက်နဲ့ သွားလို့ ရမှာလေ … အခက်ခဲတွေကို ကြံ့ ကြံ့ ခိုင် ကျော်လွှားလို့ ရမှာ … ။
ချစ်သူကို တွေ့လျှင် မေးလိုက်… ကိုယ့်သိက္ခာနဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားကို ဒီလောက်တောင် မယုံဘူးလားလို့ … ( ရင်ဘက်ကိုလက်သီးဖြင့် ဆက်တိုက် ထုပြီး မေးလျှင်ပိုကောင်းပါတယ်)
မနောရေ လေးပေါက်က မုန့်မဝယ်ကျွေးသွားဘူးလာဟင် …
မနေ့က လေးပေါက်မွေးနေ့လေ ………….
လမ်းမှာတွေ့ရင် ဝေးဝေးကရှောင်လို့ရအောင် ကျွန်တော့်ပုံ
လူတိုင်းကို အဖွဲ့အလိုက်တွေ့သွားတာဆိုတော့ ….
အဟင့် ဟင့် …
ကျွန်တော့်ကိုကျတော့ တစ်ယောက်တည်းတွေ့သွားတယ်ဆိုတော့ ….
လေးပေါက် မကောင်းတတ်လို့လား ဒါမှမဟုတ် …………..
GZ မှာ ဂိုဏ်းဂဏတွေကွဲနေပါပေါ့လား … ဘယ်သူကစခွဲတာလဲ အကျယ်အကျယ်နဲ့ အကျယ်ကြီး
ဘယ်သူက စခွဲလည်းဆိုတာ မမေးပါနဲ့ လေးဖက်ရာ… တွေ့တဲ့သူက မပြောခဲ့တာက မသိစေချင်လို့လေ… ဟုတ်တယ်ဟုတ်… ဒီတော့ ထားလိုက်ပါတော့…. ထင်တော့ထင်သား ကားဂိတ်ဘက်မသွားပဲနဲ့ ဟိုဘက်ကိုသွားတယ်ဆိုထဲက တစ်ခုခုပဲပေါ့ … စုံထောက်တော့လုပ်လိုက်ပါသေးတယ်။ မပြောတော့တာပါ။ ဘာသံထွက်လာမလဲဆိုပြီး ဒီပိုစ့်တင်လိုက်တာ အဟိ…
နောက်တာပါဟဲ့ မနောကလည်း …. လေးပေါက်ဟိုပြေးဒီပြေးမလုပ်ပါဘူး … ။
ဦးလေး ပုံပြင် တခု ရှိတယ် နှုတ်မစောင့်တဲ့ လိပ်ပုတ် ဆိုတဲ့ ပုံပြင်လေးလိုပဲ..
ပိုစ် တခု တင်တာ လွယ်တယ်။
ဦးလေး အသိဆုံးပါပဲ.. ဒီတော့ ဒီကိစ္စ ဆက်မပြောနဲ့တော့..
အကျယ် အကျယ် ဖြစ်မှာ စိုးရင် မသိချင်ယောင်ဆောင်နေလိုက်ပါ။
နောက်ပြီး ရွာထဲ မှာ တူရာ တူကြောင်း ၀ိုင်း စု တတ်တဲ့ အဖွဲ့ လေး တစ်ခု ရှိနေပြီ ဆိုတာ ကိုလည်း အသိတိုးမိလာကြောင်း…………..သည် ပို့ စ်လေး နဲ့ ညွှန်းဆို လိုက်ပါရစေနော် ။
(GZ မှာ ဂိုဏ်းဂဏတွေကွဲနေပါပေါ့လား … ဘယ်သူကစခွဲတာလဲ အကျယ်အကျယ်နဲ့ အကျယ်ကြီး
လူဆိုတာ အားလုံးသင့်မြတ်တယ်ဆိုတာ မရှိနိုင်ပါဘူး။
ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေသူ အဆင်မပြေသူဆိုတာ ရှိစမြဲပါ။
အထူးသဖြင့်ကျနော်နဲ့ ဂျီတော့ ဆက်သွယ်နေသူတွေကနေတစ်ဆင့်နီးစပ်ရာလူတွေကို တစ်ဆင့်ချင်းလိုက်စုရတာပါ။
တကယ်ပြောရရင် ကျနော်က ခဏလာတဲ့ဧည့်သည်ပါ။
တကယ်ပြောရရင် ရန်ကုန်မှာအမြဲနေသူတွေ က အားလုံးတွေ့နိုင်အောင်လုံးပန်းရမှာပါ.။
အခုတော့ ကျနော်က ခဏလေးလာပြီး ကြိုးစားပြီး တွေ့တာတောင် လူစုခွဲသလိုဖြစ်နေတယ်။
ကျွန်တော် မောင်ေ၇ွှဘိုသား ကတော. တော်တော်ကို ခေတ်နောက်ကျသွားပြီပဲ
လေးပေါက် နောက်တစ်ခေါက်လောက် ချိန်းလိုက်ပါ
ဒေါ်ဆူးရေ … ဦးလေးလို့ခေါ်လိုက်တာတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီကိစ္စဆက်မပြောပါ(ပါ)နဲ့တော့လို့ဖြစ်သင့်သဗျ။ ဒီကိစ္စဆက်မပြောပါနဲ့ ဆိုတာက အမိန့်သံ
ပြန်စဉ်းစားပါအုံး …။ ပုံပြင်လေးရှိတယ်တဲ့လား … မင်းမမွေးခင်ကထဲက အလွတ်ရနေပြီးသားတွေပါ။
အမိန့်ပေးတဲ့ လေသံ ဖြစ်သွားရင်တော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ အရေးအသား မှားသွားတာပါ။ အဲလို ရေးဖို့ စိတ်ကူး မရှိပါဘူး။
သေချာတာ တခုကတော့ ဒီမှာ ပိုစ်အနေနဲ့ တင်ပြီးတာကိုက မဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စပါ.. ဦးလေး ကို ဒီကိစ္စ ပြောတာ မဟုတ်ပေမဲ့.. တိုက်ဆိုင်သွားတဲ့ အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး။
မမွေးခင်ကတည်းက သိပြီးသား ကိစ္စ ဖြစ်နေတော့ အကျယ် အကျယ် ရှင်းပြ စရာ မလိုဘူး ဆိုရင် သိသင့်တဲ့ လူကို ဦးလေး တာဝန်ယူပြီး ရှင်းပြ ပေးဖို့ မေတ္တာ ရပ်ခံပါတယ်။
ဆူးရေ … တာဝန်ယူပြိးရှင်းပြပေးပါ လား ဆိုရင်ကိုရပါပြီ … မေတ္တာရပ်ခံတာတွေတော့ မလိုပါဘူးကွယ်
ဥိးလေးဖက်တို့အသက်ကြီးပြီ ..။ ဆိုဒ်ပေါ်မှာ အယူအဆမတူကြလို့ငြင်းကြခုံကြတာကတခြား
ရန်ဖြစ်သလိုအရေးအသားတွေက တခြားလေ။ ရန်ဖြစ်သလိုတွေ မေ၇းကြစေချင်တာလဲပါတယ်။ ဆူးရေးတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် ..။ အားလုံးကိုခြုံပြီးပြောတာပါ။ ဒီဆိုဒ်က အတော့ကို နာမည်ကြီးနေပါတယ်။ ပြိးတော့ ၀င်လာမဲ့ အသစ် ပညာရှင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ စနေနေ့ကဘဲ
့US က PHD ( physics ) အခု NTU မှာ research လုပ်နေတဲ့တယောက်က၀င်ရေးအုံးမတဲ့။
ပြီးတော့ မန်းလေးဆေးတက္ကသိုလ်က ပါမေက္ခ ဟောင်း ဒေါက်တာ တစ်ယောက်ကလဲ မကြာခင်
၀င်လာပါလိမ့်မယ်။ သူတို့က ပြင်ပနိုင်ငံကနေ ၀င်ကြမှာပါ။ အဲဒါတွေကြောင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတွေ
ရန်ဖြစ်တာတွေ … တွေ့မသွားစေချင်လို့ပါ။
ဦးလေး ရေ… ဒီပိုစ်ကို ဖတ်တဲ့ လူတွေက ဦးလေးနဲ့ ဆူး နဲ့ ရန်ဖြစ်နေတယ် ထင်နေကြအုန်းမယ်။ ဦးလေး သိတဲ့ ပညာရှိ ပညာကျော်တွေ အများကြီး ရှိသလို မသိတဲ့ လူတွေ လည်း အများကြီးပါ။
အားလုံးက ကိုယ့်နေရာနဲ့ ကိုယ်ရှိနေပြီးသားပါ။ ဆူး ဆိုလိုတာ ဦးလေး သိပါတယ်။
အစောကြီးကတည်းက အဆီအသားမတိုးတဲ့ ဒီပိုစ်ကို တင်ကို မတင်သင့်ဘူးလို့ ယူဆတယ်။
ဒီပိုစ်မှာ ရေးထားတဲ့ အချက်အလက်တွေ က ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတွေ ချရေးထားတဲ့ အကြံကုန် ဂဠုန် ဆားချက်တဲ့ ပိုစ်ကြီးဖြစ်နေတယ်။ အီးတုံးရေးထားတဲ့ တွေ့ဆုံပွဲ ဆိုတဲ့ ကွန်မန်းက ခပ်တည်တည် နဲ့ လူလည် လုပ်ပြီး တင်လို့ အမြင်ကတ်လို့ နိပ်ကွပ်သွားတာ.. အဲဒါကို ယောရောင်ပြီး အညာမိသွားကြတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီနေ့က ဆူး မြေနီကုန်းဘက်ကိုတောင် လုံးဝ မရောက်ခဲ့ဘူး။ အီးရိုးကလည်း သူမပါပဲ နာမည် ပါနေလို့ အသံပေးထားသားပဲ.. ဆူး က သူကိုနောက်ချင်လို့ ၀င်ပြီး စထားလိုက်သေးတယ်။ လူလည်လုပ်ချင်တဲ့ လူ ဘယ်လို နေမလဲ သိချင်လို့ တမင် မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ချောလဲ ရောထိုင်ပေးထားတာ။ ၀ါသနာ အရ.. သူများတွေ ပွဲဆူမှ ကျေနပ်လို့.. ဟုတ်သယောင်ယောင် စုံထောက် လုပ်တယ် ဘာညာ ၀င်ရွီးလိုက်သေးတယ်။ ရီတော့ ရီစရာ ကောင်းသားပဲ။
ဟုတ်တယ် လေးဖက်ရေ…. ။ လေးပေါက်ရန်ကုန်ရောက်ကတည်းက တွေ့ဖြစ်တဲ့ ရွာသူရွာသားတွေ နည်းမှမနည်းပဲ …ဘယ်သူမှ အသံမထွက်ပဲ … ဒီပို့စ်တက်လာလို့ …. နောက်ချင်စိတ်နဲ့ စလိုက်တာလေ… ။ မဝေလိုလေး ပြန်ရေးကြပါလား … ပျော်စရာတောင်ကောင်းသေးတယ်… ။ etone ပစ်တဲ့မြားက ငှက်ဘယ်နှစ်ကောင်မှန်သွားပါလိမ့်နော် အစနောက်သန်တာ ၀ါသနာမို့ မွှားတာရှိ … အဲ မှားတာရှိရင် တောင်းပန်ပါတယ် သီချင်းပဲ ဆိုပြလိုက်ချင်ပါရဲ့ နော် …
အဲဒီနေ့က မဝေ ခရီးသွားနေပါတယ် .. မှော်ဘီဘက်ကိုပါ … အဲဒါကြောင့် အီးတုံးအိမ်မက်ထဲမှာ ကျွန်မကို ထည့်မက်တယ်လို့ ၀င်ရေးလိုက်တာပေါ့ …
ကိုပေါက် က ရန်ကုန်မှာ မင်းသားကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့။
မန်းဂေဇက်က တွေ့ဆုံပွဲလေးလုပ်ပါ သူကြီးကိုတောင်းဆိုပါတယ်.. သူကြီးကိုယ်တိုင်စီစဉ်မှ လူစုံမှာမို့ တွေ့ဆုံပွဲလေးလုပ်ပါ ဆူးတို့ မမအိတုန်တို့ မနောတို့ လေးဖက် တို့ လေးပေါက်တို့နဲ့ လဲ တွေ့ချင်ပါတယ်.. IT Site တစ်ခုဆို နှစ်ပတ်လည်နေ့တိုင်း တွေ့ဆုံပွဲလုပ်ပါတယ်.. မန်းဂေဇက်ရဲ့ နှစ်ပတ်လည်နေ့လဲ သိချင်တယ် သိတဲ့သူများရှိရင် ပြောကြပါနော်.. ရွာကလေးတော့တည်ပြီး သက္ကရာဇ်မသိတော့ မှတ်တမ်းမရှိဖြစ်နေတယ်.. ပြောပေးကြပါ….
(ဘယ်သူက စခွဲလည်းဆိုတာ မမေးပါနဲ့ လေးဖက်ရာ… တွေ့တဲ့သူက မပြောခဲ့တာက မသိစေချင်လို့လေ… ဟုတ်တယ်ဟုတ်… ဒီတော့ ထားလိုက်ပါတော့…. ထင်တော့ထင်သား ကားဂိတ်ဘက်မသွားပဲနဲ့ ဟိုဘက်ကိုသွားတယ်ဆိုထဲက တစ်ခုခုပဲပေါ့ … စုံထောက်တော့လုပ်လိုက်ပါသေးတယ်။ မပြောတော့တာပါ။ ဘာသံထွက်လာမလဲဆိုပြီး ဒီပိုစ့်တင်လိုက်တာ အဟိ… :P)
ကျနော်တွေ့ချင်သူကို ကျနော်က ကမ်းလှမ်းလို့ သူကလက်ခံတယ်ဆိုရင် ကျနော်ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာ သူ့ကို ကျနော်တွေ့ပိုင်ခွင့်ရှိသလို။
မတွေ့ချင်ဘူးလို့ ကျနော်ကမ်းလှမ်းသူကလဲ ငြင်းပယ်ပိုင်ခွင့်အပြည့်ရှိပါတယ်.။
ကျနော်အား တွေ့ချင်သူကိုကျနော်က လက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသလို ငြင်းပယ်ပိုင်ခွင့်လဲရှိတယ်။
ဒါရွာထဲမှာ အော်အော်နေတတ်တဲ့ လူအခွင့်အရေးဆိုတာ ဒါမျိုးလေးလို့ထင်ပါတယ်။
ကျနော်နဲ့တွေ့တဲ့လူကိုအကြောင်းကို သူများကို ပြောချင်မှပြောမယ်။
ပြောချင်တယ်ဆိုရင်သာ ပြောလို့ရမလားလို့ ကာယကံရှင်အရင်ခွင့်ပြုမိန့်တောင်းရမှာ။
ရန်ကုန်မှာ ကျနော့်ပိုက်ဆံနဲ့ကျနော်လာတာ ကျနော်သွားချင်တဲ့ဘက်သွားလို့ရတယ်.။
ဒါကလဲ ကျနော့် ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေး။
ကျနော်ဘယ်သွားမယ်ဘယ်လာမယ်ဆိုတာ ခွင့်ပြုမိန့်တောင်းဘို့က ကျနော်မိန်းမ မဒမ်ပေါက်ဘဲရှိတယ်. သူသာကျေနပ်ရင် ကျနော်ဘယ်သွားသွား
စုံထောက်မကလို့ ကြိုက်တဲ့လူကို ငှားပြီးနောက်ကလိုက်ခိုင်းလို့ရပါတယ်။
ထပ်ပြောရရင် ကိုပေါက်ရန်ကုန်ရောက်သမျှကာလ ပါတ်လုံး တစ်ရက်ဘဲ ဘတ်စကားစီးပါတယ်.။
အပြတ်သားဆုံးပြောရရင် ကျနော်သူများကို မထိခိုက်တဲ့အလုပ်မှန်သမျှကျနော်လုပ်ချင်တာကို ကျနော်လုပ်မယ်။
ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ သုံးသပ်ချက်ကိုမှ ခေါင်းထဲမထည့်လို့ပါ။
ဒါပေမယ့် အစကတည်းက သူများအပြောမခံရအောင်နေတတ် လုပ်တတ်ပါတယ်။
ရွာထဲမှာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်အေးအေးလေးဘဲစာရေးတယ် ခင်တဲ့လူနဲ့စကားပြောတယ်။
တစ်ခုတော့ ရှိတယ် အယူအဆတစ်ခုနဲ့ပါတ်သက်လာရင်တော့ အလျော့ပေးလေ့မရှိဘူး။
အခုတော့ ကိုယ်ဘာသာကို လာတယ် ကိုယ်တွေ့ချင်တဲ့လူတွေ့တာကို လူခွဲတယ်ဆိုပြီးလာပြီးအလုပ်မဟုတ်တာအလုပ်လာလုပ်နေတယ်။
နောက်ဆိုရင် ဘယ်သူနဲ့တွေ့ဘို့ ဘယ်သူ့ဆီမှာခွင့်တောင်းရမယ်
တွေ့ပြီးရင်လဲ ဘယ်လိုတွေ့ကြောင်း သတင်းပို့ရမယ်ဆိုတဲ့ တွေ့နည်းလမ်းညွန်လေးများတောင်းထားပါအုံးမယ်နော်။
“ခွင့်ပြုမိန့်တောင်းဘို့က “ကျနော်မိန်းမ မဒမ်ပေါက်” ဘဲရှိတယ်
A Yann Shinn Linn Pyatt Tharr the.